Raharaha miaramila • AoRaha
Miatrana ny miaramila. Tsy ireny tazantsika mivezivezy eny an’arabe, izay manakana an’ireo tsy manao aron-tava na mampody ny olona amin’ny ora voafetra amin’ny fivezivezena ivelan’ny trano ihany, fa hatrany amin’ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19.
Noraisin’ny Foloalindahy ny fitantanana an’ilay mandatehezana amin’ny ady amin’io valanaretina io, miainga etsy Mahamasina. Samy hafa amin’ny Ivontoeram-pibaikoana amin’ny ady amin’ny Covid-19 (CCO) satria tsy baikoin’ny adiminisitratera sivily na manampa-hefana olom-boafidy, fa tarihin’ny miaramila kosa. Miatrika ady mavaivay i Madagasikara nefa nahitana lesona ny paikady napetraka hatramin’izay, rehefa niantefan’ny fanakianana sesilany, indrindra teo amin’ny fahatsapana hatrany ny fahasarotan’ny fampanatanterahana ny baiko hatreny ifotony.
Fahavalo tsy hita maso ny valanaretina, fa vao mainka novesaran’ireo fahavalo hita maso tato anatiny koa, na tamin’ny alalan’ny olombelona na tamin’ny alalan’ny toro vohana. Ny an’ny miaramila kosa, rehefa havia dia havia, rehefa havanana dia havanana. Adidy mavesatra izao hiantsorohan’ireo miaramila izao, satria vonjy aina noho izy mitovy amin’ny fiarovan’ny andian-tafika ny firenena ifaharan’ny mpanafika mba tsy ho lavon’ny mpifanandrina. Mety tsy hanao valala an-karona; tsy hifanao vela-pandrika ny samy ao anatiny… Mendri-pitokisana kokoa, angamba, ny Tafika manoloana ny karazana viriosy, na ara-pahasalamana na ara-politika, amin’ny firenena marary toa an’i Madagasikara.
Miainga amintsika ny vahaolana